Matsva matsva akavhurwa masosi ekuzadzisa zvido zvitsva | Linux Vakapindwa muropa
Nyika yetekinoroji inofambira mberi nekukurumidza zvakanyanya kupfuura iyo mitemo uye ivo vanofanirwa kuyedza kuzviita. Panyaya yemahara uye yakavhurika sosi software, ese Mahara Software Foundation uye iyo Open Source Initiative, iyo miviri inotarisira kudzora marezinesi akasiyana) Ivo nguva nenguva vanotarisana nedambudziko rekuti vangachengeta sei misimboti yavo uye panguva imwechete vachidzivirira mumwe munhu kuti asashandiswe zvisirizvo.
Munguva yekupedzisira, iyo Open Source Initiative yakamupa chisimbiso chekubvumirwa a 4 marezinesi matsva ezvimwe zvinangwa.
1 Matsva matsva akavhurwa sosi
1.1 Cryptographic Autonomy License vhezheni 1.0 (CAL-1.0)
1.2 Vhura Hardware License (OHL)
Matsva matsva akavhurwa sosi
Cryptographic Autonomy License vhezheni 1.0 (CAL-1.0)
Waive zvakasikwa mu2019 neyakavhurwa sosi projekiti timu Holochain,
Iri rezinesi rakagadzirwa kuti rishandiswe pamwe nekuparadzira makara ekushandisa. Kukanganisa nematarezenisi echinyakare ndeekuti iwo aisada kugoverwa kwedata Izvi zvinogona kukanganisa mashandiro enetiweki yese. Ndokusaka CAL zvinosanganisirawo chisungo chekupa mapato matatu mvumo nezvinodiwa zvekushandisa uye kugadzirisa software zvakazvimiririra pasina wechitatu arasikirwa nedata kana kugona.
Vhura Hardware License (OHL)
Kubva paruoko rweEuropean Organisation yeNuclear Research (CERN) rezinesi iri rakauya nemhando nhatu eyakatarisa pane mukana wekugovana zvakasununguka zvese Hardware uye software.
Kujekesa kunofanira kuitwa. OSI yakatanga kugadzirwa ne software mupfungwa, saka haina nzira dzekubvumidza marezinesi ehurdware. Asi, sekutaura kweCERN kunoreva zvinhu zvese izvi, izvi zvakaita kuti mvumo igoneke.
Myriam Ayass, chipangamazano wezvemitemo weCERN's Knowledge uye Technology Transfer Group, ndiye munyori wenyaya yemarezinesi matsva. Hapana mumwe ari nani kupfuura iye kutsanangura chinangwa chayo
CERN-OHL marezinesi anoreva kumaharaware izvo emahara uye akavhurika sosi marezinesi ari software. Vanotsanangura mamiriro ezvinhu angave ane rezinesi angashandise kana kushandura zvinhu zvakapihwa marezinesi. Ivo vanogovana zvimiro zvakafanana seyakasununguka kana yakavhurika sosi software: chero munhu anofanirwa kukwanisa kuona iyo sosi - dhizaini dhizaini mune kesi ye Hardware -, dzidza nezvayo, shandura uye ugogovana.
Sezvatakataura, vhezheni yechipiri yeOHL ine matatu akasiyana. Mune iyo FAQ vanotsanangura izvi nekugadzira fananidzo neakavhurika sosi software marezinesi
Munzvimbo yesoftware, pane matatu anowanzozivikanwa emahara uye akavhurwa sosi marezinesi ehurumende: anotendera, asina simba copyleft, uye yakasimba kopyleftft. Iko kune zvaunofarira uye mashandisiro emakesi pane yega sarudzo, uye zvakafanana nezve Hardware. Isu tinoshandisa izwi rekuti "kudzoreredza" pachinzvimbo che "copyleft" nekuti kodzero dziri pasi pedu hadzina kungogumira pakopiraiti.
Vaya vanofarira kugovera magadzirirwo avo nerudzi rwechi rezenisi vanofanirwa kuona akasarudzwa achishandisa mavara: S, W kana P:
CERN-OHL-S iri rezinesi rakasimba rekudzosera.. Chero ani anoshandisa dhizaini pasi peiri rezinesi anofanirwa kuita kuti zviwanikwa zvekugadziriswa kwayo uye zvinowedzerwa zviwanikwe pasi peiyo rezinesi.
CERN-OHL-W irisiti isina simba yekudzosera. Izvo zvinongomanikidza kugovera mafonti echikamu chechimiro chakaiswa pakutanga pasi pacho. Kwete kudaro zvinowedzerwa nekugadziridzwa.
CERN-OHL-P rezinesi rinobvumidzaku. Iyo inobvumidza vanhu kutora chirongwa, kuisazve rezinesi, uye kuishandisa pasina chero chisungo chekugovera zvinyorwa.
Zvinofanira kutaurwa kuti vanhu vepaCERN vanoita kunge vakawana mhinduro yedambudziko rave kukanganisa mamwe mabasa akavhurika. Kambani hombe inoshandisa chirongwa ichi kushambadzira masevhisi uye kwete chete inoita chero mupiro kuchirongwa chekutanga (kungave nekodhi kana rutsigiro rwemari) asi zvakare inokwikwidza mumusika mumwe chete.
Isu tanga tataura kare Linux Vakapindwa muropa Iyo kesi yeElastic, mupi wemakore ekutsvaga matekinoroji akachinja iro rakavhurika sosi rezinesi kune maviri marayisensi scheme yekudzivirira vafi vevashandi vegore kushandisa zvigadzirwa zvaro mahara. Iyo Open Source Initiative yakataura zvinesimba ichipesana nerudzi urwu rwekuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nyowani yakavhurwa sosi marezinesi ekupindura kune zvitsva zvinodiwa
Mageia 8 inosvika neyakagadziridzwa, kugadzirisa kweSSD uye nezvimwe